John Kerry oo u digay Bashar al-Asad - BBC Somali - Warar
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 14 Mey, 2013, 14:24 GMT 17:24 SGA
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Mareykanka John Kerry
Mr Kerry ayaa ka jawaabayay soo jeedin hore oo ka timid saraakiil dowladda Suuriya oo ahaa inay suurtagal tahay inay diidaan inay ka soo qeybgalaan shirkaasi nabadda.
Shalay ayaa Madaxweynaha Mareykanka iyo Raiisul Wasaaraha Britain ay ku heshiiyeen in cadaadis la saaro dowladda Suuriya.
Dhinaca kale, si weyn ayaa loo cambaareeyay video internetka la soo geliyay dalka Suuriya.
Video ayaa waxa uu muujinayaa nin lagu sheegay taliye mucaaradka oo inta uu soo gooyo kadibna qaniinaya wadnaha iyo beerka askari dhintay dhintay oo ka tirsan ciidanka dowladda Suuriya.
Isbahaysiga mucaaradka Suuriya ayaa sheegay in qofka waxaasi sameeyay maxkamad la soo taagi doono.